कपिल`वस्तुका थ`प दुई जना`मा कोरोना भाइ`रस पुस्टि, नेपालमा १०१ नयाँ सं`क्र`मित पुग्यो !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/कपिल`वस्तुका थ`प दुई जना`मा कोरोना भाइ`रस पुस्टि, नेपालमा १०१ नयाँ सं`क्र`मित पुग्यो !!
कपिल-वस्तुका २ जनामा कोरोना संक्र`मण पुष्टि भएको छ । यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्र-मितको सं`ख्या १०१ पुगेको स्वा`स्थ्य तथा जनसं`ख्या मन्त्रा`लयले जनाएको छ । राष्ट्रि`य जन-स्वास्थ्य प्रयोग`शाला, काठमाडौं`मा गरिएको परी`क्षणमा २ जनामा कोरोना संक्र-मण पु`ष्टि भएको हो ।
संक्र-मित हुने कपिलवस्तु ८ निवा`सी १६ र २२ वर्षका दुई पुरुष छन् । उनीहरुको स्वा`स्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र स्वास्थ्य`कर्मीको सम्पर्कमा रहेको मन्त्राल`यका सह-प्रवक्ता डा समि`रकुमार अधिकारीले जानकारी दिए ।
कपिलवस्तुमा पहिलो पटक कोरोना भेटिएका हुन् । यसअघि कपिल`वस्तुको छिमेकी जिल्ला रुपन्देहीमा एक जनामा कोरोना संक्र-मण पु`ष्टि` भएको छ ।
नेपालमा पहिलो पटक माघ ९ मा कोरोनाको पु`ष्टि भएको थियो । दोस्रो केस १० चैतमा देखियो, जुन बढेर अब १०१ पुगेको छ ।
उनीहरु मध्ये १९ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । निको भइसकेका तीन जनाको पुनः पो`जेटिभ आएको छ । स्वा`स्थ्य मन्त्रा`लयका अनुसार देशभर अहिले पनि १३३ जना चिकित्स`कीय निग`रानीमा छन् भने १७ हजार`बढी क्वारे`न्टाइनमा छन् ।